जागिरे आमाबाबुका सन्तानमा कसरी पर्छ मनोवैज्ञानिक असर ? – जीवनशैली
Home /स्वास्थ्य/जागिरे आमाबाबुका सन्तानमा कसरी पर्छ मनोवैज्ञानिक असर ?
काठमाडौं : अभिभावकको रोजगारीले बालबालिकालाई के दिन्छ ? सबैको जवाफ हुन्छ लालनपालन तर रोजगारीका नाममा कामको पछि दौडिएर छोराछोरीलाई समय नदिदाँ उनीहरूको जीवनलाई कसरी मनोवैज्ञानिक असर गर्छ भन्ने कहिले सोच्नुभएको छ ?
उहाँ थप्नुहुन्छ, यो त्यति गाह्रो कुरा पनि होइन । साथै हामीले आफ्ना छोराछोरीसँग भौतिक र मनोवैज्ञानिक उपस्थित हुनका लागि केही सिर्जनशील तरिका अपनाउन सक्छौँ जस्तै विदाको समयमा घुमाउन लग्ने, दैनिक आधा घण्टा भए पनि उनीहरूसँग समय विताउने, बगैँचामा फूल रोप्न लगाउने र आफू पनि काम गर्ने यसले गर्दा दिमागमा एउटा रमाइलोपन आउँछ ।
डा.शाक्य भन्नुहुन्छ, उपस्थिति धेरै समयका लागि हुनुपर्छ भन्ने होइन । मुख्य कुरा उनीहरूसँग उपस्थित हुँदा हामी कति ध्यान दिन्छौँ भन्ने कुरामा निर्भर गर्छ ।